umbuzo moya Classic
iinyanga 1 kunyaka 9 eyadlulayo #570 by Harrislarry1946
Bhotani ................. ngaba wakha wacinga yokwenza DC8 download ??
iinyanga 1 kunyaka 9 eyadlulayo #571 by Gh0stRider203
ngoku bekuya kuba mnandi. Kukho phandle phaya embalwa, zombini freeware kunye payware kodwa Yhe omnye Rikoooo wayeza kuba mnandi
iinyanga 1 kunyaka 9 eyadlulayo #573 by Harrislarry1946
Bekuya kuba mnandi ngakumbi xa kwenziwe lo msebenzi radio kaThixo.
I oluthandwa endiza yam FS2004 kwiimeko IFR kwaye uyithande 757 version umbhiyozo kodwa
awunakucwangcisa unomathotholo ukuya ekhaya phezu beke okanye ILS ..... lottta elungileyo okwenzayo.
Ukuba wenza DC8 bekuya kuba mnandi ukuba version nangengalo.
iinyanga 1 kunyaka 9 eyadlulayo #578 by Gh0stRider203
Ndithanda ukwenza ezihamba imigama imithwalo ukuze kuphela ukwenza IFR on ngexesha elinye / ukufika XA ukuba. Andinalo ixesha ukuhlala i ATC esweni. Singasathethi ezinye iinqwelo-moya wam kwenze bumini kwaye mna avulwe bonwabele eyaziwa ngokuba ukulala ngoku kwaye ke le nto lol